Ọkachamara Semalt: API ma ọ bụ ụzọ kachasị mma iji wepụ data si na Websaịtị
Ngwa ngwa mmemme ngwa ngwa ma ọ bụ API na-enyere gị software na ngwaọrụ iji kwurịta okwu. Anyị na-ebi n'ime ụwa ngwa ngwa, ebe ihe niile na-agbanwe n'ike n'ike, anyị chọrọ ịchekwa oge na ike anyị. Ngwa data nke nchịkọta data nwere ike iri oge buru ibu ma mee ka o siere anyị ike ịga ahịa n'Ịntanet.Ọ bụghị nanị na-enye aka wepụ data bara uru site na weebụsaịtị mana ọ na-edekwa data a napụtara ma mee ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ịdaba na ya maka ndị ọrụ. Ya mere, ọ dị mma ịsị na API bụ ụzọ dị mma maka ndị mmemme na coders iji kwurịta okwu ha - nitecore d4 review.
API na - ejikọta ibe teknụzụ:
Ndị ọkachamara kwenyere na API bụ koodu ziri ezi nke ndị ọkà mmụta sayensị dere nke na - eme ka ọ dịrị anyị mfe wepụ data sitere na ọtụtụ ibe weebụ.Ọ nwere ike ịlebanye aka na teknụzụ ma kpochapụ ozi ha. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji Facebook Graph API iji nweta na wepu data sitere na ibe Facebook, obodo, na netwọk ndị ọzọ.
API - Ụzọ kachasị mfe nchịkọta data
Oge ọ bụla anyị chọrọ ịnweta data nke otu weebụsaịtị anyị ga-eji API. N'adịghị ka usoro ndị ọzọ na-emepụta ihe ọmụma data nkịtị, API na-arụ ọrụ ya ngwa ngwa ma nwee ike ihichapụ data gị n'ihe karịrị asụsụ 120. Ya mere, ma ị ga-ehichapụ ozi site na weebụsaịtị Chinese ma ọ bụ chọrọ iwepụ ozi sitere na akụrụngwa Japanese, API ga-ewepu ma ọ bụ kpochapụ ya n'otu ntabi anya dị ka ntụziaka gị.
Gịnị mere API ji dị mkpa maka azụmahịa?
Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ibe weebụ ma chọọ iwepu data ha niile n'ime otu awa ma ọ bụ abụọ, API bụ ụzọ dị mma iji mee nke ahụ. Naanị ị ga-emeghe API iji wepụ data ziri ezi. Ọ na-erite uru n'ụlọ ọrụ na ụzọ atọ ndị a:
1. Ndị ahịa nwere ike ịmepụta ngwa ọdịnala na API
Ụzụ nwere ike ịmepụta ngwa dị iche iche na API n'emebighị mma. Ụfọdụ ụlọ ọrụ weebụ na-ere ngwá ọrụ na ngwanrọ na-adabere na ịnweta ozi sitere na API ngwa ngwa iji nyere aka n'ịhazi usoro azụmahịa ha. N'ezie, na-enweghị API, azụmahịa apụghị ịmalite ma ghara ịmepụta ngwa bara uru maka ndị ahịa ya.
2. Nchọpụta nke isiokwu
API dị mkpa maka azụmahịa n'ihi na ọ na-ahapụ ndị mmemme na-ewu ihe dị ịtụnanya ihe nchọgharị weebụ . Ngwaọrụ ndị a na-enyere anyị aka ịrụ ọrụ anyị n'ụzọ ka mma. Dị ka ihe atụ, API ndị dabeere na isiokwu ahụ na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịchọta mkpụrụokwu na ahịrịokwu maka weebụsaịtị anyị. Mgbe ị na-ehichapụ data ahụ, API na-elezi anya isiokwu anyị ma ghara ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ha na mmepụta.
3. API dị mma maka ndị mmepe na onye mmemme
Ndị API nwere ike inweta ndị na-emepe ihe na ndị mmemme nwere ike inye ndị ahịa ha ohere kachasị mma.Dị ka ọmụmaatụ, a kwalite Reddit dịka ngwa ngwa mkpanaka ma dabere na ọtụtụ ngwaọrụ na ọrụ nchịkọta data iji chebaa onwe ya anya. Ugbu a Reddit bụ otu n'ime ebe kachasị mma nke okporo ụzọ weebụ. Iji API, ị nwere ike ịmepụta Reddit-dị ka forums ma nwee ike ịbawanye ọtụtụ mmadụ na ụbọchị ole na ole.